नेपाल बैंकको चौथो तहको गण्डकी र २ नं. प्रदेशको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक क–कसको निस्कियो हेर्नुस्
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले चौथो तहको सहायक पदका लागि यही बैशाख २९ देखि ३१ गते सम्म लिएको अन्र्तवार्ता परीक्षाको अन्तिम नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्वार्ता उर्तिण गरी..
धर्मशालालाई होटलको स्वरुपमा संचालन गर्दै आनन्द म्यानेजमेन्ट
काठमाडौं । भारतीय सहयोगमा काठमाडौंको तिलगंगामा निर्माण भएको नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला पोखरास्थित होटल आनन्द म्यानेजमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गर्ने भएको छ । गत भदौमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री..
१७ हजार सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, कुन सेवामा कति पर्ने भए कार्वाहीमा ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्धारित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा तोकिएको..
प्रभु बैंकले ठुलो सङख्यामा कर्मचारी माग्यो, कुन पदमा कति
काठमाठौ । प्रभु बैंकले विभिन्न पदका लागि जागिर खुलाएको छ । प्रभु बैकद्धारा प्रकाशित सूचना अनुसार ६७ जना भन्दा धेरै कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको छ । बैंकद्धारा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार ब्रान्च..
नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन, यि हुन सफल उमेद्वारहरु (नामावली सहित)
नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन, यि हुन सफल उमेद्वारहरु (नामावली सहित) काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको छ । ..
सरकारले १ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने, कुन तहमा कतिले पाउँछन् काम (हेर्नुुस् सूची)
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष भित्रै १ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउने भएका छन् । विभिन्न स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले परिपत्र नै जारी गरेर बेरोजगारी सूचीमा दर्ता..
पाइलट, डाक्टर, पत्रकार र नर्सलाई नेपाली सेनामा जागिरको अवसर
काठमाडौं । नेपाली सेनाले विभिन्न प्राविधिक समूहमा आवस्यक जनशक्ती माग गरेको छ। जंग अड्डाले प्राविधिक पदमा खाली ठाउँमा पदपूर्ती गर्ने भन्दै सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ। सेनाले लेखा तर्फ उपसेनानी सरह..
लाईफ इन्स्योरेन्स नेपालले माग्यो १ सय कर्मचारी
काठमाडौं । लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) ले १०० जना कर्मचारी माग गरी सुचना प्रकाशन गरेको छ । जुनसुकै विषयमा स्नातक उर्तिण ३० बर्ष नकटेकाले आवेदन गर्न सक्नेछन् । ..
नेपाल बैंकको चौथो तहको सहायकमा कर्णाली र सुदुरपश्चिममा क–कसको निस्कियो नाम (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले चौथो तहको सहायक पदका लागिा यही बैशाख २३ देखि २५ गते सम्म लिएको अन्र्तवार्ता परीक्षाको अन्तिम नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्वार्ता उर्तिण गरी..
१२ लाख जनाको वृद्धभत्ता दोब्बर हुँदै, कर्मचारीको तलव २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने
काठमाडौं । स्रोतले भ्याएसम्म लोकप्रिय बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलव वृद्धिका साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता डब्बल बढाउने तयारी थालेको छ । चुनावी घोषणा घोषणापत्र गरिएका..
एजेन्सी । दक्षिण कोरियामा सबै मजदुरलाई स्थायी गर्न कोरियन मजदुर महासंघ ९केसीटीयू० ले दवाव दिएको छ। शनिबार हेवाबाट राष्ट्रपति भवनसम्म दवाव र्‍यालि गरेका थिए। त्यहाँका राष्ट्रपतिले चुनावका बेला आफुले चुनाव जिते..
प्रहरी प्रधान कार्यालयले निकाल्यो सहायक निरीक्षक पदको नतिजा (नामसहित)
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा लिएको परिक्षाको नतिजा शुक्रबार प्रकाशित गरेको छ । कार्यालयले २०७५ असोज १५ गते लिइएको विशेष स्वास्थ्य परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित गरेको हो । साथै..
होटल क्षेत्रमा १० खर्ब लगानी, १० लाखलाई रोजगारी वार्षिक २५ लाख पर्यटकलाई धान्ने
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेका होटल व्यवसायमा पछिल्लो समय लगानी बढेर गएको छ । चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेशनजस्ता प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह होटल व्यवसायतर्फ आकर्षित..
लोकसेवाले ११ हजार ४ सय ९२ पदमा विज्ञापन गर्ने निश्चित, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमध्ये ११ हजार ४ सय ९२ पदमा विज्ञापन गर्ने निश्चित भएको छ । बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती..
पूर्वाञ्चलको मावि तहको खुला तर्फ अंग्रेजी विषयको नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौं । माध्यमिक तहको खुला तर्फ स्थायी पदपुर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगले असोज ११ गते लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले आज अंग्रेजी विषयको नतिजा सार्वजनिक गरेको..
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६११ पदका लागि परीक्षाको मिति तोक्यो, यस्तो छ परीक्षा तालिका
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको परीक्षा मिती तय गरेको छ । आयोगले चैत २२ गते विभिन्न पदमा गरेर ६११ पदमा आवेदन खुलाएको थियो । आयोगले बरिष्ठ प्रवन्धक ९ तह..
खुला तर्फ मावि तहको मध्यपश्चिमाञ्चलको अंग्रेजी विषयको नतिजा सार्वजनिक
खुला तर्फ मावि तहको मध्यमाञ्चलको अंग्रेजी विषयको नतिजा सार्वजनिक
लमजुङ । लमजुङको उत्तरी भेगमा रहेको लमजुङ हिमाल र अन्नपूर्ण हिमालको काखमा रहेको दक्षिण एशियाकै नमूना एवं नेपालकै पहिलो स्मार्ट भिलेज बन्दै गरेको घलेगाउँमा २०औँ घलेगाउँ महोत्सव शुरु भएको छ..
नेपाल बैंकको छैटौ तहको सहायक प्रबन्धकमा क–कसको निस्कियो नाम ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले छैटौ तहको सहायक प्रबन्धक पदका लागिा यही बैशाख १२ देखि १९ गते सम्म लिएको अन्र्तवार्ता परीक्षाको अन्तिम नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्वार्ता उर्तिण..
बृद्ध भत्ता १ हजार र कर्मचारी तलब २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने
काठमाडौं । मन्त्रालय अहिले बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी छ । योजना आयोगले भने सरकारलाई १४ खर्ब ९३ अर्बको सिलिङ..
खुला तर्फ मावि तहको सामाजिक र अंग्रेजी विषयको नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौं । माध्यमिक तहको खुला तर्फ स्थायी पदपुर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगले असोज ११ गते लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले आज सामाजिक र अंग्रेजी विषयको नतिजा..
एनआईसी एशिया बैंकले माग्यो ३०० जना कर्मचारी,
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी मागेको छ । बैंकले आइतबार सूचना जारि गरी एकै पटक ३ सय कमर्चारी माग गरेको हो। बैंकले काठमाण्डौभित्र र बाहिरका शाखामा..
स्थानीय तहले मागे १० हजार कर्मचारी, लोकसेवाले भर्ना खुलाउने
काठमाडौं। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय स्थानीय तहले झन्डै १० हजारको संख्यामा कर्मचारी माग गरेका छन् । ती स्थानीय तहले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गरिदिन आग्रह गर्दै संघीय मामिला तथा..
यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षको बजेटबाट सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा गरेको छ। आज संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारले कर्मचारीहरुलाई हालसम्म प्रदान गरिंदै आएको सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने नीति..
खुला तर्फ मा.वि. तहको नेपाली, सामाजिक र लेखा विषयको नतिजा सार्वजनिक (नामसहित)
काठमाडौं । माध्यमिक तहको खुला तर्फ स्थायी पदपुर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगले असोज ११ गते लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले आज नेपाली र कार्यलय संचालन तथा..
मा.वि. तहको नेपाली विषयको शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइएको परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौं । माध्यमिक तहको खुला तर्फ स्थायी पदपुर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगले भाद्र ११ गते लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले आज नेपाली विषयको नतिजा सार्वजनिक गरेको..
तलबभत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाः प्रधानन्त्रीको तलब मासिक ९४ हजार, अब क–कस्को कति ?
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणमा खटिरहेको बेला कार्यसञ्चालन निर्देशिकामार्फत दरबन्दी तथा तलबभत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक साता जिल्ला बस्दा ४ दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ भने..
शिक्षक सेवा आयोगबाट मा.वि. तहको विज्ञान विषयको नतिजा सार्वजनिक
काठमाडौं । माध्यमिक तहको खुला तर्फ स्थायी पदपुर्तिको लागि शिक्षक सेवा आयोगले भाद्र ६ गते लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले आज विज्ञान विषयको नतिजा सार्वजनिक गरेको..
Results 878: You are at page6of 30